Faka injini yokusesha isithombe kuFirefox | Izindaba zamagajethi
Ngenxa yobukhona bama-plugins ambalwa athuthukiswe ngabantu besithathu, kulezi zinsuku Amathuba okwenza ngokwezifiso injini yethu yokusesha yeFirefox makhulu. Isibonelo, ungathanda ukubeka isithombe sakho kubha yokusesha yalesi siphequluli se-Intanethi?
Lona ngumsebenzi esizozama ukuwenza manje ngesiphequluli sethu seMozilla Firefox. Ukuze ube nombono ocacile wokuthi siphakamise ukwenzani, okokuqala siphakamisa ukuthi buyekeza ezinye izici lesi siphequluli esiyingxenye yazo kusuka ku-Intanethi nakamuva, sizophakamisa izinyathelo okufanele zilandelwe ukufeza lokhu kwenziwa ngokwezifiso kwe-Search Bar ku-Mozilla Firefox.
1 Yisiphi isikhala esakhiwe yi-Search Bar ku-Firefox?
2 Sizokwenzenjani ngempela ngaleli bha yokusesha kuFirefox?
3 Ngingayakha kanjani injini entsha yokusesha?
Yisiphi isikhala esakhiwe yi-Search Bar ku-Firefox?
Uma uyisivakashi obekuwebhu isikhathi eside lapho uzokwazi ukuthi ungaziqaphela kanjani izinto eziyingxenye yesixhumi esibonakalayo sesiphequluli se-Intanethi. Kunokwehluka okumbalwa phakathi kwezinye zazo, okuthile okuthi uzokwazi ukubona ikakhulukazi phakathi kweGoogle Chrome neFirefox. Abokuqala babo beze ukuhlanganisa isikhala sebha yokusesha naleyo ye-URL, ngenkathi eMozilla Firefox lezi zinto ezi-2 zigcinwa zodwa, ngaphandle kokuthi uqhubeke okokufundisa lapho sihlanganisa khona zombili izindawo. Lokho esinentshisekelo yokubhekana nakho manje kungakwesokudla phezulu, isikhala lapho singabhala khona noma yisiphi isihloko esidinga ukusiphenya ngaphakathi kwezinjini zokusesha. Lona imvelo esizoyiguqula manje futhi senze ngezifiso isithombe sethu noma oyithandayo.
Sizokwenzenjani ngempela ngaleli bha yokusesha kuFirefox?
Njengoba sibonile indawo nendawo lapho le Bar Yosesho itholakala ngaphakathi kwesiphequluli seMozilla Firefox, manje esikhundleni salokho siphakamisa ukuthi wenze lolu vivinyo oluncane:
Qonda esikhaleni se- Sesha ibha kuFirefox.
Chofoza umcibisholo omncane ophendukezelwe phansi.
Ngalezi zivivinyo ezi-2 ezilula esiziphakamisile uzokwazi ukubona ubukhona be- izinjini zokusesha ezilungiselelwe ngaphakathi kwale Bha yokusesha, sibeke lapho sizofaka khona enye injini eyodwa, okuzoba isizathu nenhloso yokwenza ngokwezifiso esikuphakamisile ngalesi sikhathi. Ukufeza lokhu, sizosebenzisa i-add-on ebanjwe endaweni yokugcina yeFirefox, ongayilanda kusixhumanisi esilandelayo.
I-plugin enegama le- Ibha yokusesha izohlanganisa ngokushesha isiphequluli, ingadingi ukuqala kabusha kwayo njengoba ezinye ezifanayo zivame ukucela.
Ngingayakha kanjani injini entsha yokusesha?
Yebo, uma sesivele silandele izinyathelo eziphakanyiswe ezigabeni ezedlule, lapho-ke sizobe sesikulungele ukuqala ukusebenzela ukufinyelela enhlosweni yethu eyinhloko. Lapho usuyifakile i-plugin ebesiyiphakamisile ngaphambili, manje kufanele iya kuwebhusayithi lapho kunezindaba onentshisekelo kuzo, okuzoba umgomo ukudala le injini yokusesha entsha eyenziwe ngezifiso; ngalokhu siphakamisa ukusetshenziswa kwanoma iliphi ikhasi lewebhu yize kungenxa yezizathu zokuzijabulisa, sizosebenzisa isiza se vumabazine:
Ngokufakwa okufakiwe siya ku- vinagreasesino.com (noma enye into ongaba nentshisekelo kuyo)
Sibheka isikhala sokucinga kuleli khasi lewebhu.
Esikhundleni sokuthayipha okuthile, sichofoza inkinobho yegundane langakwesokudla.
Imenyu yokuqukethwe izovela.
Kusukela kokukhethwa kukho sikhetha leyo ethi «engeza kubha yokusesha".
Kuzovela iwindi elincane lokuzivelela.
Lapho sibhala umaki othile kokuqukethwe kwaleli khasi lewebhu (ngokwesibonelo sethu, kungaba isoftware, amaqhinga, okokufundisa) endaweni efanele futhi, negama le injini yokusesha ezoba nalo.
Kunenketho encane eyengeziwe esicela ukuthi sibeke isithombe noma isithombe, kufanele sichofoze kuso ukuze sikwazi zulazula uye endaweni lapho kutholakala khona lesi sithombe futhi ngenxa yalokho, ikhethe ukuthi ibe yingxenye yale njini entsha yokusesha esizoyibeka ku-Search Bar of Firefox.
Ngemuva kokwenza zonke lezi zinyathelo sizokwazi ukubona ukuthi en Ibha yokuSesha yeFirefox isithombe sethu siyavelaInto ebaluleke kakhulu ukuba ngumsebenzi owenziwa yile ndawo entsha esiyenzile. Izosebenza njenge injini yokusesha yangokwezifiso ye- vinagreasesino.com, okusho ukuthi uma sibhala isihloko ngesoftware, imiphumela ekhonjisiwe izoba ngeyalabo kuphela abaphethwe kuleli khasi lewebhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungasibeka kanjani isithombe sethu kubha yokusesha yeFirefox
[Umbono] I-E3 edingeka kakhulu kunanini ngaphambili